DEG DEG:- Ra’iisul wasaare Kheyre oo goordhaw shir ka furay magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ra’iisul wasaare Kheyre oo goordhaw shir ka furay magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa goordhaw magaalada Muqdisho ka furmay shir lagu dardar-gelinayo howlaha xukuumadda Soomaaliya oo loogu magac daray “Dar-dar Gellinta Waxqabadka Xukuumadda”, kaas oo looga hadli doonno meelaha dhibaatooyinka iyo gaabiska ay ka jiraan shaqooyinka xukuumadda Soomaaliya.
Shirkaan ayaa waxaa furay ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, waxaana ka qeyb galaya qeybaha kala duwan ee bulshada oo fikirkooda iyo dareenkooda ka jeedinaya shirka, waxaana goobta ka hadlay dad fara badan oo qaarkood suugaan kusoo bandhigay.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo hadal kooban ka jeediyay shirkaasi ayaa golihiisa wasiiradda u sheegay in haatan loo baahan yahay in la kasbado kalsoonidda shacabka, islamarkaana loo addeego.
Sidoo kale, dadka shirkaasi ka qeyb galaya ayaa waxaa ka mid ah dad Soomaaliyeed oo danyar ah, islamarkaana doonaya inay golaha wasiirrada ee shirka ka qeyb-galeysa la wadaagaan dhibaatooyinka ay ku qabaan dowladda iyo bixinta adeegyada aasaasiga ah.
Ugu dambeyn, shirkaan oo magaalada Muqdisho ka socon doonno muddo labo maalmood ah ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ku dhageystaan dadweynaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.